Trump oo balan qaaday in uu soo celin doono nashaadkii Maraykanka - BBC News Somali
Madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa balan qaaday "in uu soo celin doono" nashaadkii Maraykanka, isaga oo khudbaddiisii u horaysay u jeediyay aqalka Congress-ka.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in uu bog cusub u furi doono dalkiisa.
Trump ayaa cambaareeyay burburkii loo gaystay xabaalaha Yuhuudda iyo falkii nacaybka ahaa ee dhawaan lagu dilay ninkii Hindiga ahaa ee ka dhacay Kansas.
Khudbaddiisan ayaa looga gol leeyahay in wax lagaga badalo dadka badan ee ay ka daadagi la'dahay madaxtinimada Trump.
Khudbadda madaxweynaha oo saacad socotay ayuu ku sheegay in dalkiisu uu yahay mid ku midooba cambaaraynta ficilada nacaybka ku salaysan.
Waxaa kale oo uu difaaacay carabkana ku adkeeyay ka bixitaanka Maraykanka ee heshiiska ganacsiga ee Trans-Pacific Partnership, iyo amarkiisii ahaa in darbi laga dhiso xadka Maraykanka iyo Maksiko.
Image caption Marwada koobaad ee Maraykanka Melania Trump midig oo khudbadda joogta
Waxaa kale oo uu ka hadlay in ay macquul tahay is badal dhab ah oo wanaagsan lagu sameeyo hanaanka socdaalka, saacado uun ka dib markii uu saxafiyiinta Aqalka Cad ugu sheegay in laga yaabo in uu sharciyo siiyo soo galootiga aan sharciyada haysanin, taas oo tilmaamaysa in uu isbadal ku sameeyay siyaasadiisii hore.
Trump oo waaxda cadaaladda ku tilmaamay mid baaba'day
Wuxuu xildhibaanada u sheegay in shuruucda socdaalka oo la dhaqan geliyo ay horseedi doonto in ay sare u qaadaan dhaqaalaha dadka dalka soo gala, in la caawiyo dadka shaqo la'aanta ah, in la badbaadiyo balaayiin doolar, iyo bulshooyinka oo dhan ay nabad ku naaloodaan.
Image caption Madaxweyne Trump oo u muuqda in uu isha iska sii marinayo khudbadda ka dib markii uu ka baxay Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalka Maraykanka isaga oo ku sii jeeday Congress-ka.
Waxyaabihii kale ee Trump uu ku soo qaatay khudbadda:
Trump wuxuu yiri Maraykanku "wuxuu aad u taageersan yahay Nato", laakiin dalalka xubnaha ka ah waa in ay "ka soo baxaan masuuliyadda dhaqaale ee saran"
Wuxuu baarlamaanka ka dalbaday "in ay go'aan qaataan ayna meesha ka saaraan oo badalaan hanaanka caafimaadka ee Obamacare, iyadoo salka loo dhigayo hannaan adeeg caafimaad u saamaxaya dadka midka hadda jira isticmaala.
Trump wuxuu ballan qaaday "canshuur dhimis ballaaran in uu u sameeyo dadka dabaqadda dhexe ah, inkastoo uusan faahfaahin badan ka bixinin.
Aqalka Congress-ka ayuu waydiistay in ay meel mariyaan hal tirilyan oo doolar oo loo adeegsado kaabayaasha dhaqaalaha.
Madaxweynaha ayaa aad loogu sacabeeyay markii uu dhaliilay kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka isaga oo ballan qaaday in uu adduunka ka cirib tiri doono.
Halkan ka dhagayso warbixintii uu Maraykanka ka soo diray Weriyaha BBC Maxamed Xaaji Xuseen Shiine.